घरमै गोलभेडा फलाउने सजिलो विधी | Nepal Dabali
२१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:४६ LeaveaComment on घरमै गोलभेडा फलाउने सजिलो विधी
तपाईं-हाम्रो भान्सामा नभई हुन्न, गोलभेडा । सागसब्जीमा मिसाउन होस् वा अचार बनाउन, गोलभेडा चाहिन्छ । तरकारी, दाल, अचारदेखि सलादसम्ममा गोलभेडा प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले त हाम्रो भान्सामा धेरै खपत हुनेमध्ये एक हो यो । गोलभेडाले खानेकुराको स्वाद बढाउने, रंग आकर्षक देखाउने मात्र होइन यो आफैमा पोषणयुक्त पनि हुनेगर्छ । त्यसैले गोलभेडाको सेवन स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ ।
तर, सधैभरी गोलभेडा उपलब्ध हुँदैन । बजार जाने अनुकुलता पनि मिल्दैन । त्यसमाथि गोलभेडा उत्पादन गर्ने क्रममा विभिन्न विषादीको प्रयोग गरिएको हुनसक्छ । त्यसो हो भने किन आफ्नै घरमा, आफ्नै हातले उत्पादन नगर्ने ?
गोलभेडा रोप्नका लागि ठूलो ठाउँ चाहिँदैन । गमलामा समेत गोलभेडा उत्पादन गर्न सकिन्छ । भान्साको आसपासमा खाली भाग भए त्यहाँ पनि रोप्न सकियो ।
धेरैलाई अनुभव नहुन सक्छ, गोलभेडा कसरी रोप्ने ?
सबैभन्दा ठाउँको छनौट गरौं । गोलभेडा उत्पादनका लागि त्यस्तै ठाउँ उपयुक्त हुन्छ, जहाँ पर्याप्त घाम लाग्छ । किनभने गोलभेडालाई दिनमा ८–१० घण्टाको घामको उज्यालो चाहिन्छ । ओसिलो ठाउँमा गोलभेडा राम्ररी फस्टाउँदैन ।
जति संभव हुन्छ, उत्तिनै ठूलो गमला छनौट गरौं । गोलभेडाको बोटलाई एकदमै धेरै पोषक तत्वको आवश्यक हुन्छ । यसैले पर्याप्त माटो अटाउने गमला उपयुक्त हुन्छ । जति जति बोट बढ्दै जान्छ, मल र माटो पनि थप्नुपर्छ । अन्डाको खोललाई धुलो बनाएर माटोमा मिसाउँदा निकै राम्रो हुन्छ ।
रोप्ने ठाउँ तयार भयो, गमला तयार भयो । अब बिउ चाहियो । कुनैपनि गोलभेडाबाट बिउ निकाल्न सकिन्छ । यद्यपि आफुसँग भएको गोलभेडाको विउ गुणस्तरिय छैन भन्ने लागेमा स्थानिय नर्सरीबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ ।
बिउलाई गमलामा राखेर माथिबाट हल्का माटोले छोपिदिने । यसमा थोरै थोरै पानी राख्नुपर्छ, नियमित रुपमा । केही समयपछि बिउ अंकुराउन थाल्छ । एक इन्च जति लामो भएपछि त्यसलाई गमलामा अर्को गमलामा सार्नुपर्छ । एउटा गमलामा एउटै मात्र बिरुवा रोप्नुपर्छ ।
गोलभेडा रोपेपछि त्यसको माटोलाई सुख्खा हुन दिन हुँदैन । थोरै थोरै पानी सिंचित गरिरहनुपर्छ । गमला हल्का चिसो हुनुपर्छ तर धेरै गिलो हुनुहुँदैन । गोलभेडाको बिरुवा बढ्दै गएपछि त्यसलाई स–सना लट्ठीले थाङ्ग्रा लगाउनुपर्छ वा डोरीले बाँध्न पनि सकिन्छ । यसले गर्दा फल लाग्न थालेपछि बोट भाँचिदैन ।
गोलभेडाको बिरुवालाई दिनहुँ पानी लगाउनुपर्छ । माटो र मल पनि बेलाबखत थप्नुपर्छ । सुख्खा पात वा कुहिएको पात, डाँठलाई निकाल्नुपर्छ । यसरी राम्ररी स्यहारसुसार गरेपछि गोलभेडा राम्ररी उत्पादन हुन्छ ।
दाम्पत्य जीवनमा मनमुटाव ल्याउने ७ भ्रम
२६ जेष्ठ २०७७, सोमबार ११:५९ Nepal Dabali